- स्विस बैंकमा नेपालीको अर्बौं रुपैयाँ; कसरी पुर्याइन्छ नेपालीको कालो धन?
स्विस बैंकमा नेपालीको अर्बौं रुपैयाँ; कसरी पुर्याइन्छ नेपालीको कालो धन?
स्विट्जर्ल्यान्डको केन्द्रीय बैंक, स्विस न्यास्नल बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको एक विवरण अनुसार नेपाली नागरिकको नाममा रहेको खातामा ३५ अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ भएको खुलासा गरेको छ । नेपालको कानुनले सरकारको स्वीकृति बिना देश बाहिरका बैंकमा बचत तथा शेयरमा लगानी गर्ने अनुमति दिँदैन । तर यस्तो विवरण सार्वजनिक हुँदा समेत नेपाल सरकार भने मौन रहेको छ ।
स्विस न्याश्नल बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार नेपालीहरुको निक्षेप पछिल्लो एक दशकमा चार गुणाले बढेको पाइएको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको २०१७ को वार्षिक तथ्यांकअनुसार स्विस बैंकमा पैसा जम्मा गर्नेमा नेपाल विश्वको १०९ औं स्थानमा रहेको छ ।
स्वीट्जरल्याण्डमा यदि बैंकहरुले आफ्नो ग्राहकसँग सम्बन्धित जानकारी अन्य कसैलाई पनि दिएमा अपराध मानिन्छ । तर पछिल्लो समयमा आतंकबाद, भ्रष्टाचार वा कर छलीका घटनाहरूका कारण स्वीट्जरल्याण्डका बैंकहरुले गैरकानुनी भएको आशंका लागेमा यस्ता खाताहरू बन्द गर्ने वा खोल्न बाध्य नहुने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
नेपालबाट अवैध ढंगले आर्जित धन सम्पत्ति विदेशी बैंकमा राख्ने गरेको कुरा विगतमा पनि उठ्दै आएको छ । स्विस बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरण पछि यस विषय पुनः उठ्न सुरु भएको छ । नेपालमा भ्रस्टाचार अधिकतम् हुने हुँदा नेपालीहरुले समेत स्विस बैंकमा आफ्नो अवैध धन जम्मा गरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यतिको ठूलो रकम विदेशी बैंकमा रहंदा समेत सरकार भने मौन रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेप्युटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले स्विस बैंकमा रहेको रकमको स्रोतबारे शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त भएको बताएका छन् ।
यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका बाबुराम भट्टराईले नेपालीले स्विस बैंकमा लुकाइराखेको रकमबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन माग गरेका छन् । उनले ट्विटरमा “नेपालबाट अवैध ढंगले आर्जित अकूत सम्पत्ति विदेशी बैंकमा राख्ने गरेको कुरा विगतमा पनि उठ्ने गरेको हो । अब त स्विस बैंकले नेपालीहरुको ३२२.८८ मिलियन स्विस फ्र्यांक (करिब ३५ अर्ब नेरु) लुकाएर राखेको खुलासा गरेको छ । यसबारे अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र छानविन आयोग बनाएर सत्यतथ्य पत्ता लगाऊँ । ” भन्दै ट्विट गरेका थिए ।
विनास्रोत जम्मा हुने रकम आतङ्कवाद, लागुपदार्थ ओसारपसारजस्ता डरलाग्दा क्रियाकलामपसँग सम्बन्धित हुनसक्ने भन्दै विभिन्न देशहरूले स्विस बैंकसँग सूचना आदानप्रदानका लागि समझदारी गर्न थालेका छन् । नेपालले भने स्विट्जर्ल्यान्डसँग त्यस्तो समझदारी नभएकाले नेपालीहरूले स्विस ब्याङ्कमा कुन स्रोतबाट रकम पुर्‍याए त्यसको जानकारी नेपालसँग छैन।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौला भन्छन्, “पारस्परिक सहायता ऐन कानुनअन्तर्गत सम्बन्धित देशहरूसँग सन्धि गरेपछि सूचना आदानप्रदान गर्ने बाटो खुल्छ । हामी त्यसको गृहकार्यमा लागेका छौँ।”
स्विस बैंकमा कालोधन कसरी पुर्याइन्छ ?
नेपाल लगायत विश्वका देशहरुबाट स्विस बैंकमा कालोधन पुर्याउने क्रम बढिरहेको छ । तर, नेपाल लगायतका मुलुकबाट स्विस बैंकमा पैसा कसरि पुग्छ भन्ने सर्वत्र चाँसोको बिषय बनेको छ।
१८ बर्ष पुगेका जो कोहिले स्विस बैंकमा सहजै खाता खोल्न सक्छन् । तर, बैंकलाई कुनै विषयमा शंका भएमा उनीहरुले सुरुमै खाता खोल्ने प्रकृया खारेज गरिदिन्छन् ।
बिजनेश स्ट्यान्डर्डका अनुसार स्विट्जरल्यान्डमा साना ठुला गरि करीब ४०० बैंकहरु छन् । यिनीहरु मध्ये युबीएस र क्रेडिट सुइस ग्रुप सबै भन्दा ठुला बैंकहरु हुन् ।
कुल बैंकहरुको ब्यालेन्स सिटको आधा हिस्सा यी दुई बैंकले ओगटेका छन् । जुन खातामा सबै भन्दा बढी गोपनियता हुन्छ त्यसलाई नम्बर खाता भनिछ । यो खातासंग जोडिएका सबै जानकारी एकाउन्ट नम्बरको आधारमा हुन्छ ।
यो खातामा ग्राहकको नाम उल्लेख हुँदैन । यस्तोमा बैंकमा उच्च तहका कर्मचारी बाहेक अन्यलाई यो कसको खाता हो भन्ने बारे कुनै जानकारी नै हुँदैन । नम्बर खाता लिनेहरुले आफ्नो पहिचान लुकाउनकै लागि बैंकले दिने क्रेडिट, डेबिट कार्ड वा चेक समेत लिंदैनन् ।
यो खाता खोल्न जति सहज छ त्यो भन्दा पनि सहज बन्द गर्न छ । ‘मध्यस्थ ठेकेदार’ नेपाल लगायतका देशहरुमा स्विस बैंकमा पैसा पुग्ने बाटोहरु धेरै छन् । स्विस बैंकमा कालोधन पुर्याउने बाटो मध्ये सबै भन्दा बढी प्रयोग हुने भनेको ‘हवाला कन्ट्रयाक्टर’ अर्थात ‘मध्यस्थ ठेकेदार’ हो ।
यो तरिकामा ठेकेदारहरुले पैसा लिए बापत केहि कमिशन लिएर जुन देशमा जुन व्यक्तिको बैंक खातामा पैसा पठाउन चाहेको हो त्यस खातामा पैसा पुर्याउने काम गर्छन् । यिनीहरुसंग अत्यन्त गोप्य र बलियो संजाल हुन्छ । जस कारण यिनीहरुले सहजै कामलाई अन्जाम दिन्छन् ।
यद्दपी कालोधन स्विस पुर्याएर त्यहाँको बैंकमा राख्ने कार्यका लागि ठुलो र बलियो संजाल रहेको हुन्छ । नेता तथा शक्तिमा भएका व्यक्तिहरुसंग उनीहरुको राम्रो सम्बन्ध हुनेगर्छ । जस कारण उनीहरुले यो कार्यलाई सहजै अन्जाम दिन्छन् ।
निषेधाज्ञा उल्लंघन गरी हिँड्ने ५ हजार ७ सय ९५ जनालाई होल्डमा राखी छाडियो